Mitady toerana mitsabo adala
Date: 03 janvier 2018 - 17:45
Manana havana tsy salama saina ka mba mila fanampiana. Sao misy amitsika mahalala toerana mitsabo sy mandray azy ireny, ankoatrany eny Anjanamasina.
Marihina fa zava-mahadomelina no nahatonga azy ohatranio, ka mety ihany koa zany raha irony centre de desintoxication irony.
Misaotra mialoha ho anareo mamaly.
Re: Mitady toerana mitsabo adala
Date: 05 janvier 2018 - 12:25
Raha centre de désintoxication no tadiavinao, jereo hoe ny hôpital luthérien Ambohibao. Désintoxication alcool misy ao, fa tsy fantatro raha manao momba ny drogue koa izy.
Par: vovkovoko manga
Date: 11 janvier 2018 - 07:06
@ Vokovoko manga ireny koa otran'ny misy mitsabo, tsy haiko raha mbola eo fa eo Andravoahangy ampitan'ny Shop liantsoa somary miverina kely mankany @ tetezana misy soratra mikasika an'io.
Date: 15 janvier 2018 - 21:49
AO @ GIRARD ROBIC misy desintoxication na rongony na toaka !!!
Date: 17 janvier 2018 - 08:55
Oh misy toerana fitsaboana adala karakarain'i Masera ery Beronono Imeritsiatosika alohan'ny karting, jereo sao mahasoa
Date: 30 janvier 2018 - 13:13
misy contact dr afaka omeko anao. Apetrao ny mail d alefako aminao